Mamwe Makereke Oshorawo Tsamba Yakanyorwa neZCBC
Nyamavhuvhu 20, 2020
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nezuro vakazopindura kutsamba yakanyorwa nemabhishopu ekereke yeRoma ari pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference (ZCBC) achikurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko ari munyika anosanganisira nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Vachitaura pamusangano wePolitiburo yebato ravo reZanu PF, VaMnangagwa vakati bato ravo rine hukama hwakanaka chose nevemakereke hunobva munguva yehondo yerusununguko. Asi mutungamiri wenyika vakati vanokatyamadzwa kuona kuti kune vamwe vemakereke vatanga kuda kushandisa kereke dzavo kuendesa mberi zvinangwa zvakahwandika zvekuda kubvisa hurumende vachishandiswa nenyika dzekunze.
VaMnangagwa vakati vemakereke vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kubuda pachena voumba mapato ezvematongerwo enyika anozokwikwidzana neZanu PF musarudzo dza 2023.
Hurumende yagara iri kuramba kuti munyika mune matambudziko.
Vachitaurawo kumusangano wemakereke kwaMutare nezuro, mutungamiri wekereke yeZion Christian Church (ZCC) uye vari mutungamiri wemubatanidzwa wemachechi emunyika, weZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, VaNehemiah Mutendo, vakashoropodza danho resangano reZCBC rekutaura nezvenyaya yeGukurahundi vachiti makereke haafanirwe kuvhura mavanga akapora kare.
VaMutendi vakati makereke anofanirwa kupedzera simba rawo mukubatanidza vanhu. Studio7 hainakukwanisa kunzwa divi reZCBC.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa, Doctor Munyaradzi Ricky Mukonza, vanoti vanoona sekunge mhinduro yemutungamiri wenyika inoratidza kuti VaMnangagwa havasi kunzwisisawo dambudziko riri munyika pari zvino.